Tuk Tuk, Saddex lugooleey iyo Bajaaj midka aad doonto ugu yeer. Waa Taksi riqiis ah oo caasimado badan laga adeegsado. Mana ahan wax ceeb ama khatar wada.
Muqdisho waxaa laga adeegsan jiray kala-roorkii ka hor. Waxaa iigu dambeysay waddada isku xirta Ansalooti iyo Ceel Gaab oo aniga oo yar oo hooyadeey gacanta i hayso aan raaci jirnay. Waxaan u maleynayo ilaa siddetamaadkii in ay soo gaartay oo ay ka shaqeyneysay.
Waxaa kale oo ay shaqo u abuurtay kuwa soo dejiya, kuwa iibsada, darawaliinta ugu shaqeysa, wiilasha dhaqa, garaashyada lagu dayactiro iyo qaar kale oo badan.
Waa gadiid u saaxiib ah degaanka oo aan gubin shidaal badan oo markaa aan uumi sun ah hawada ku sii deyn.
Sawirku waa New Delhi, caasimadda dalka India oo ka mid ah dalalka dunida ugu dhaqaalaha badan. Waa maalin ay wadayaasha Tuk Tuk ay shaqa-ka-fariisi sameeyeen.
Dhammaanteen aan is-xaqdhowrnaa.